LEWIS PHYO's Page - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
22, MaleFrankston,VIC 3199,Melbourne,AustraliaAustralia Share on Facebook
Blog PostsDiscussions (2)EventsGroups (2) LEWIS PHYO's Likes LEWIS PHYO's Groups
LEWIS PHYO's Friends
LEWIS PHYO has not received any gifts yet
LEWIS PHYO's Page
Cho Wut Yee and LEWIS PHYO are now friendsAug 20, 2011LEWIS PHYO joined Hein Min Htet Kyaw's groupMicrosoft CertifiedThis Group for all of Microsoft CertifiedMay 20, 2011 9
LEWIS PHYO joined Min Lwin's groupMyanmar IT Wordsကှနျ​ပြု​တာ​ကို​အသုံးပွု​ဖို့ အင်ျဂလိပျ​စာ လို​အပျ​ပါ​သလား။ အင်ျဂလိပျ​စာ မ​တကျ​ရငျ​ပဲ ကှနျ​ပြု​တာ​နဲ့ ပတျသကျ​တဲ့ ပညာ​ရပျ​တှေ​ကို လေ့​လာ​လို့​မ​ရ​တော့​ဘူး​လား။အှနျ​လိုငျး မွနျမာ​အိုငျ​တီ​အဘိဓာနျ ရေး​တဲ့ စနဈ​တဈ​ခု​ကို​ရေး​ကွ​ရအောငျ။See MoreApr 4, 2011 8
skylay leftacomment for LEWIS PHYO"ဟိုင် fri အခုမှတွေလို့ တောင်ပန်ပါတယ် ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်တောင်ကြီးကပါ ဖိုးရှမ်းလေးလို့ခေါ်ပါတယ် ခင်မင်ခွင့်ရတာကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကောင့်အမည်ကတော့ phoshanlay77@gmail ပါ ခင်မင်တယ်ဆိုရင်အပ်နိုင်ပါတယ် ပညာလေးတွေအတူတူလေ့လာကြတာပေါ့ fri"Jul 31, 2010LEWIS PHYO leftacomment for kyawsint"hi,
I am PHYO THU (LEWIS PHYO).Nice to meet u.And thank u for greeting me like this.You can treat me like your bros.Thanks !!!!!!!!!!
See U Later"Jun 13, 2010LEWIS PHYO replied to Kyaw Myo Hlaing's discussion ကူညီကြပါဦးဗျာ"hi,
it is ok if you remember your user name.At gmail login page,you will see " forgot password " under the password box.so click this(forgot password".and you will be asked your user name in the next page to recover password for your…"Jun 13, 2010kyawsint leftacomment for LEWIS PHYO"မင်္ဂလာပါ။
ကျွန်တော် ကျော်ဆင့် ပါ။
နာမည် ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ။"Jun 13, 2010LEWIS PHYO replied to ပြည့်စုံ's discussion နတ်ဝတ်နဲ.ဆာဗာ အခြေခံလမ်းညွှန် သင်ခန်းစာများ။"Hi, Ko Pyi sone
Thanks for your explanation about network.And i like your explanation.it is exact and understandable for everyone.Moreover
i would like to know all about LAN (Local Area Network) & WAN ( Wide Area Network) in Myanmar.Pls can you…"Jun 13, 2010LEWIS PHYO updated their profile photoJun 13, 2010LEWIS PHYO updated their profileJun 13, 2010LEWIS PHYO is nowamember of MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT ProfessionalsMay 2, 2010 Welcome Them! RSS
IT Student (Beginner)
At 7:52pm on July 31, 2010, skylay said… ဟိုင် fri အခုမှတွေလို့ တောင်ပန်ပါတယ် ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်တောင်ကြီးကပါ ဖိုးရှမ်းလေးလို့ခေါ်ပါတယ် ခင်မင်ခွင့်ရတာကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကောင့်အမည်ကတော့ phoshanlay77@gmail ပါ ခင်မင်တယ်ဆိုရင်အပ်နိုင်ပါတယ် ပညာလေးတွေအတူတူလေ့လာကြတာပေါ့ fri At 5:01pm on June 13, 2010, kyawsint said… မင်္ဂလာပါ။
နာမည် ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ။ No comments yet!